Our Blogs – HotelMaineli
One of our best sellers in Nyaung Shwe!Maineli Hotel offers accommodation in Nyaung Shwe, 1 km from Mingala Market. Free WiFi is accessible throughout the property. Delicious foods are served at the restaurant on site and free private parking is available for...
မင်္ဂလာပါရှင်…တောင်ကြီး/ အင်းလေး ကို အလည်လာကြမယ့် ခရီးသွားဧည့်သည်တော် များကိုတောင်ကြီးမြို့ နဲ့ လည်းမဝေး အင်းလေးရဲ့့ ဇက်ဆိပ်မြို့ လေး(ညောင်ရွှေ) မှာတည်ရှိတဲ့ ဟိုတယ်မိုင်းလီ ( Hotel MaineLi) နဲ့ မိတ်ဆက်ပါရစေ ။ Hotel MaineLi မှာအခန်းပေါင်း ၂၅ ခန်းရှိပါတယ် ။ မနည်းလွန်းမများလွန်းတဲ့အနေအထားမှာပါရှင် ။ ဒါပေမယ့်အခန်းအမျိုးအစားအလိုက်ထူးခြားမှုလေးတွေရှိပါတယ် ။ ?ပထမဆုံး Maine Li Suite ဆိုတဲ့အခန်းလေးကို ပြောပြပါ့မယ် .. Maine Li Suite (2ခန်း )...
Beautiful hotel with comfortable beds and room. Nothing to complain about except having to climb the stairs when you have baggage to carry. Locatedabit far from the jetty therefore require some walking.